मुखले भनेर मात्रै समृद्धि सम्भव छैन : अशोक राई
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका वरिष्ठ नेता अशोक राईले समृद्धि मुखले भनेर मात्रै सम्भव नरहेको जिकिर गरेका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक ट्रेड यूनियन महासंघलाई पार्टी प्रवेश गराउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेता राईले यस्तो जिकिर गरेका हुन् ।
एमाले–माओवादी एकता ९ वैशाखमा, विवादित विषयमा छलफल नै भएन
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच वैशाख ९ गते पार्टी एकता हुने भएको छ । लामो समयको रस्साकसी र छलफलपछि दुई पार्टीले वैशाख ९ गते एकता घोषणा गर्न लागेका हुन् । बिहीबार बसेको पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठकले ९ गते एकता गर्ने गरी तयारी थाल्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न सहकारी मोडल उपयुक्त भएको बताएका छन् । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय र राष्ट्रिय सहकारी महासंघको संयुक्त आयोजनामा भएकोे दोस्रो सहकारी महासम्मेलको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले देश विकासका लागि सहकारीको विकल्प नभएकाले उच्च प्राथमिता दिइएको दाबी गरे ।
कर्णाली प्रदेशको आर्थिक विधेयक पारित
कर्णाली प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि विधेयक कार्यविधि पारित भएको छ । बुधबार बसेको प्रदशसभाको ९ औं बैठकले प्रदेश सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पेश गरेको आर्थिक कार्यविधि विधेयक सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको हो ।
सम्बन्ध सुमधुर बनाउन भारत जाँदैछु : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो आसन्न भारत भ्रमण सद्भावना भ्रमण भएको बताएका छन् । बुधबार बिहान सरकारी निवास बालुवटारमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुसँगको छलफलमा ओलीले भारत भ्रमण देशको हितका लागि बताए ।
मन्त्री र सांसदको सेवा–सुविधाबारे सहमति
तीन नम्बर प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधाको बारेमा सैद्धान्तिक सहमति गरेको छ । साथै प्रदेशसभा सचिवालयका सचिवको काम कर्तव्य र अधिकारको निर्धारणका साथै एउटा बोर्ड गठन गर्ने समेत सहमति भएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणमा नयाँ सम्झौता नहुने स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने, “प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण नौलो छैन, विषयवस्तु पनि नौला छैनन्, सबै विषय टेबुलमै छन् ।” मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा नेता महतले नेपाल–भारतबीच धेरै आयामहरु भएको स्पष्ट पारे ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा देशलाई अप्ठ्यारो पर्ने, नोक्सान हुने, लज्जाबोध हुने र शिर निहुर्याउने जस्ता राष्ट्रहित विपरित कुनै सहमति नहुने बताएका छन् ।
प्रदेश एकको आर्थिक कार्यविधि विधेयक पारित
प्रदेश नम्बर १ प्रदेशसभाले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि विधेयक–२०७४ सर्वसम्मतबाट पारित गरेको छ । प्रदेशसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले विधेयक पारित गरियोस् भनी गरेको प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित भएको हो ।
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता गर्न गठित एकता संयोजन समितिको बैठकमा दुई कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा १९५० को सन्धिबारे कुरै हुँदैन् : डा. थापा
नेपाल–भारत प्रवुद्ध समूहका नेपाल तर्फका संयोजक एवम् पूर्व राजदुत डा. भेषबहादुर थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तीन दिने भारत भ्रमणमा १९५० को सन्धिबारे कुरै नहुने स्पष्ट पारेका छन् । थापाले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण सफल र फलदायी हुने विश्वास दिलाए ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट चैत २९ गते सार्वजनिक गरिने
प्रदेश नम्बर १ प्रदेशसभाले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि विधेयक–२०७४ सर्वसम्मतबाट पारित गरेको छ । प्रदेशसभाको बुधबार बसेको बैठकमा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले विधेयक पारित गरियोस् भनी गरेको प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित भएको हो ।
स्थानीय सरकारलाई सेवक बन्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले स्थानीय तहलाई सरकारभन्दा पनि जनताको सेवक बन्न निर्देश गरेका छन् । सरकारभन्दा पनि जनताको सेवक हुने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय तहलाई निर्देश गरेका हुन् । शनिबार गाउँपालिका महासंघको महाधिवेशनमा प्रमुख अतिथि बनेका उनले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सेवक ठानेर काम गर्नुपर्ने आग्रह गरे ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सद्भावका निम्ति : परराष्ट्रमन्त्री
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीको आगामी भारत भ्रमण सद्भावका लागिमात्रै भएको बताएका छन् । गठबन्धनको स्थिर सरकार गठन भएकाले भारतले आफूहरुसँग सहकार्य गर्न चाहेकाले प्रधानमन्त्रीको भारत भम्रण तय भएको उनले बताए ।
कानुनी ज्ञानको कमीले कार्यसम्पादनमा अलमल र अन्योल सिर्जना भएपछि म्याग्दीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले निर्वाचित कानुनी प्रक्रियाको विषयमा जानकारी लिन तालिम लिन थालेका छन् । स्थानीय तहले जनप्रतिनिधिको क्षमता विकासका लागि तालिम सञ्चालन गरेका हुन् ।